Frankfurt အစိမ်းရောင်ငံပြာရည် - ပင်သီးခြားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးနှင့်အတူဂုဏ်ပြုအိမ်မှာဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်သောသမိုင်းတွေအများကြီးနဲ့ဒဏ္ဍာရီပန်းကန်, ။ ဖွဲ့စည်းမှု၏အသိသာရိုးရှင်းနေသော်လည်းနာမည်ကြီးငံပြာရည်ဆော်ရဲလ်, chervil, ရွက်, borage, burnet, chives နဲ့ parsley အပါအဝင်ခုနစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပါဝင်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအမျိုးမျိုးအချဉ်မုန့်နှင့်ကြက်ဥအနှစ်နှင့်အတူအနံ့, ပြီးတော့အသားနဲ့အာလူးဖို့တိုက်ကျွေးသည်။
Frankfurt အစိမ်းရောင်ငံပြာရည် - စာရွက်
ခုနစျပါးလတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှော - 250 ဂရမ်;
မုန့် (20%) - 250 ဂရမ်;
ဒိန်ချဉ် - 155 ဂရမ်;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - ။ -1 Tsp ။
သငျသညျ Blender ၏ပဒေသာရှိပါကချက်ပြုတ်စက္ကန့်တဲ့ကိစ္စကြာပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ, အဒိန်ချဉ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်အတူတကွ whisk, ကြက်ဥအဖြူ, သံပုရာဖျော်ရည်၏အရောအနှောဖို့ဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့ add, အဲဒီနောက်ရိုက်နှက်မှုကိုပြန်လုပ်ပါ။
Frankfurt ငံပြာရည် - စာရွက်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 15 ml ကို;
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ - 65 ဂရမ်,
မုန့် - 410 ml ကို;
အစိမ်းရောင်လေဆာရောင်ခြည်ရောနှော - 300 ဂရမ်;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
တစ်ဦး Blender, ဟင်းသီးဟင်းရွက်စင်ကြယ်သော၏ခုတ်ရောနှောရှည်များကိုင်ဆောင်ထား။ အစိမ်းရောင်ကောင်းစွာဖွာဒိန်ခဲ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေနံနှင့်ကြက်ဥအနှစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲဖို့ mashed အာလူးထည့်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲကြာပွတ်, အချဉ်မုန့်နှင့်အတူအခြေစိုက်စခန်းငံပြာရည်မှေးမှိန်နဲ့ကုန်တယ်ကြက်ဥအဖြူထည့်ပါ။ အရသာအတွက်ဆားနှင့်သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူရာသီအားလုံး။
လူအပေါင်းတို့သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခုတ်ဖို့ Blender ၏မရှိခြင်းအတွက်ငါးပိမှလက်, အဲဒီနောက်ငံပြာရည်၏ကျန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရှိသည်။
အချဉ်မုန့်နှင့်အတူ Frankfurt အစိမ်းရောင်ငံပြာရည်
ငံပြာရည်အဘို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှော -2လက်တဆုပ်စာ;
မုန့် - 110 ဂရမ်;
ဒိန်ချဉ် - 80 ဂရမ်,
မုန်ညင်း - 1 Tsp ။ ,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 10 ml ကို;
မြေပြင် fenugreek ၏အဖြစ်တော့။
ကြက်ဥစုံတွဲတစ်တွဲပြုတ်လျှင်, အခွံနှင့်ခုတ်အေးပြီးနောက်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဓါးခုတ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးငါးပိစကြာပွတ် Blender လှည့်။ ရောနှောကြက်ဥအနှစ်, မုန်ညင်း, ဒိန်ချဉ်, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့် fenugreek နှင့်အတူ greens ။ မြည်းစမ်းဖို့အချဉ်မုန့်နှင့်ဆားနှင့်အတူငံပြာရည်ဖြည့်စွက်။ အာလူးပြုတ်နှင့်ကြက်ဥနှင့်အတူမျြးစိမျ့စိမျ့ Frankfurt ငံပြာရည်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
အသားနှင့်အတူ pancakes - အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများဘီလာရု
Minced အသားနှင့်အတူ spaghetti
Kharcho ဟင်းချို - အိမ်မှာစာရွက်
ထူးအိမ်သင် crispy focaccia - စာရွက်
ပဲမျိုးစုံ lobio ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Fox ကနေသားမွေးအင်္ကျီ - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ Pestsovaya အင်္ကျီအပြီးကြည့်ဖို့?
မိန်းမတို့အဘို့ကြံ့ခိုင်ရေး wear - ဖက်ရှင်များအတွက်စတိုင်အားကစားမတ်မတ်
ဖောင်း - ရောဂါလက္ခဏာ
ကောင်လေး၏ 18 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Oatmeal ဂျယ်လီအံ့ဖွယ် Slim
"nee zhenyatsya နှင့် uzhe potom အျောဟစျသံ မှစ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ne Cry မှစ. ။ " - မတ်ေတာ၏သားသမီးများ၏ပါးစပ်
ထိုးပြီးဘောင်းဘီ - မိန်းကလေးများနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အဆင်းလှသောနှင့်အဆင်ပြေအဝတ်အစားတွေ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ scarves - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်ဒီနှစ်
ပန်းရောင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံပေါ်သောအရာကို မှစ. ?